IFTIINKACUSUB.COM: Qiso yaableh: Qashinka aanu ku tuurno wadooyinkayaga Ajaaniibta ayaa naga gurta!
Qiso yaableh: Qashinka aanu ku tuurno wadooyinkayaga Ajaaniibta ayaa naga gurta!
Safarka oo qaatay saacado kooban ayaa markii aanu tagnay tuulada Xaraf, waxaanu durba horay ka galnay ujeedadii aanu halkaasi u tagnay oo ahayd in aanu muuqaallo kala duwan kasoo duubno deegaanka Xaraf oo booyadaha biyuhu magaalada Hargeysa ay uga soo dhaamiyaan.
Tababarka ama aqoon korordhsiga oo ku saabsanaa qaabka sawir qaadista, ayaa waxa aniga iyo kooxdii suxufiyiinta ahayd halkaasi ka samaynay muuqaallo iyo sawirro kala duwan oo ku saabsanaa mawduucii aanu u tagnay deegaanka Xaraf, iyadoo macallimiintii jarmalka ahaa ee nala socday ay iyaguna markasta noo ahaayeen kuwa na hagaya oo hadba wixii talo iyo tusaaleyn ah na siinaya.
Kaddib markii qaarkayo ay cuneen ama ay laasteen cuntadii fududeed oo ka koobneed sharaab nooca caagadaha ah iyo Saanweej, ayaa waxa ay bilaabeen in bacihii iyo caagadihii ay sharaabka ka dhameysteen ay ka tuuraan daaqadda Baska, iyagoo ku dhex tuuraya Beer ka ag dhaweyd gaadhiga aanu saarnayn ee baska.
Mid kamid ah labadii macallin ee tababarka bixinaayay ee Jarmalka ahaa ayaana arkay falka ay ku dhaqaaqeen ardaydiisii ,taasi oo ah inay caagadihii iyo qashinkii kale ee ay cuntada ka cuneen ku tuureen isla goobtii ay joogeen oo ahayd goob beer ah, waxaana uu bilaabay macallinkii in uu baska ka dego oo uu gacantiisa kusoo guro caagadihii madhnaa ee ay sharaabka ka cabeen ardaydu iyo qashinkii kale isagoo aad wajigiisa ka dheehan karto sida uu uga xumaaday falka ay ku dhaqaaqeen ardaydiisu iyo sida aanay Wadankooda uga ilaalinayn Qashinka.
Markii aanu aragnay shaqada uu bilaabay macallinku ayaa waxa ay nagu noqotay anfariir iyo naxdin ,waxaana aanu bilownay in aanu gurno hadhaaga qashinkii ku daatay beertii aanu ka ag dhaweyn, kuwo naga mid ahina waxay bilaabeen inay ku tiraabaan hadallo muujinaya sida ay u damaqday ninka aan muwaadinka ahayn ee gartay waxa ay garan waayeen muwaadiniintii waddanka u dhalatay "isagoo Ajnabi ah ayuu innaga wadddanisanaaday taasi waxay ceeb ku tahay innaga" mid naga mid ah ayaa sidaas yidhi.